Xisbiga Wadajir oo ku tilmaamay sharci darro ansixinta Golaha Adeegga Garsoorka – Kalfadhi
Xisbiga Wadajir oo ku tilmaamay sharci darro ansixinta Golaha Adeegga Garsoorka
Xisbiga Wadajir oo uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa sharci darro ku tilmaamay in xubno ka mid ah Xukuumaddii dhacdy ay ansixiyaan Golaha Adeegga Garsoorka.
Xisbiga ayaa caddeeyay in haddii Ra’iisul wasaaraha uu dhaco ama uu is casilo in xubnaha xukuumadiisana ay meesha ka baxayaan.
“Waa tallaabo kale oo si ula kac ah Rajiimka talada haya ugu tuntay dastuurka iyo shuruucd Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri War saxaafadeed ka soo baxay Xisbiga Wadajir.
Shir ay yeesheen golaha wasiirrada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 30-kii bish 7-aad 2020, ayaa lagu meel mariyay shanta xubnood ee bannaanka ka imaanaya oo kamid noqonaya golaha adeegga garsoorka dalka.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka uu soo saaray Xisbiga Wadajir;